Jesus, juputara na Mọ Nsọ, si na Jọdan na e mere site na Mọ Nsọ na desert, ebe ruo ụbọchị iri anọ nwara ya ọnwụnwa ekwensu. Ọ rie ihe ọ bụla n'oge ndị ahụ, na na na njedebe nke ha ọ bụ agụụ na-agụ.
mbụ, ahapụ-atụle kpọmkwem ebe anyị na-ahụ onwe anyị Luke's gospel. A obere tupu, na isi atọ, Jọn Baptist na-ekwusa ozi ọma banyere Jizọs na baptism ndị ọzọ, na Jizọs n'onwe Ya na-abịa mee ya baptizim. John e baptism a ọtụtụ ndị na, ma mgbe Jizọs na baptizim ihe dị iche iche na-eme. Mmụọ Nsọ-arịdata na Ya na nudi nke aru, dika nduru; na a olu na-abịa site Heavens okwu, "Ị bụ Ọkpara ọ hụrụ n'anya; na ị na m ezi mma. "Ya mere, ebe anyị na Chineke na-ezisa Jesus karịrị nnọọ onye amụma nkịtị, ihe karịrị nnọọ a Messiah; Jizọs bụ kpọmkwem Ọkpara Chineke.
Mgbe na-agwa anyị banyere nke a nkwupụta site na Chineke, na n'iru na-agwa anyị ihe ndị mere baptizim Ọkpara Chineke ga-eme, Dị ka na-enye anyị a osuso-ọmumu, na-agwa anyị banyere Jesus' okpu. Osuso-ọmumu-aga n'ụzọ nile azụ Adam. Ya mere, ebe anyị nwere Onyenwe anyị Jizọs, onye na-abụghị nanị Chineke Ọkpara Chineke, ma Ọ bụkwa a n'agbụrụ Adam, nke mbụ nwoke. Jizọs pụrụ iche. Jizọs bụ Chineke-nwoke.
Ya mere,, onye mma anya na ịmụta otú anyị ga-eme ọnwụnwa? Dị ka anyị anya na n'amaokwu abụọ, anyị na-aga ele anya na ihe atọ anyị kwesịrị icheta mgbe anyị na-enwe ọnwụnwa.
m. Chineke na-enye ohere na-eji Ọnwụnwa dị ka akụkụ nke ya Plan (1-2a)
Jesus, juputara na Mọ Nsọ, si na Jọdan na e mere site na Mọ Nsọ na desert, ebe ruo ụbọchị iri anọ nwara ya ọnwụnwa ekwensu.
Ya mere na-esonụ Jesus 'baptism, ebe O kwuru, Ọkpara Chineke na onye Nna bụ mma, i nwere ike na-atụ anya na Mọ nke Chineke ga-eduga Jesus ka dethrone ọjọ King Herod, ma ọ bụ ma eleghị anya, iziga ya ozugbo na-amalite ya na-eje ozi nke na-ekwusa ma na-eme ihe ịrịba ama na ọrụ ebube. Ma that's bụghị ebe Mọ Nsọ na-eduga na Ya. Kama Mmụọ Nsọ na-eduga na Ya na mbara. Mmụọ Nsọ na-edu ya ka nnọọ ebe ekwensu ga ịnwa Ya ọnwụnwa.
Ugbu a n'ezie Ọkaakaa, maara ihe nile Mmụọ Nsọ maara na Ọ na-edu Jesus na nnọọ ebe Satan ga ịnwa Ya ọnwụnwa - ke otu ụzọ na Mmụọ Nsọ maara na Ọrụ 20, na ya na-eduga Paul ka Jerusalem, na na Pọl ga-akpagbu na tụrụ mkpọrọ n'ebe. Ọ na-agwa Paul ihe ize ndụ nke dị n'ihu Ya, ma constrains Paul iga na O nwere ike ikwusa ozioma. Ọnọdụ a ọ dị iche iche. Mmụọ Nsọ maara na Jizọs ga-ezute na-aka site ekwensu, ma Ọ na-edu Ya e agbanyeghị.
Gịnị mere Mmụọ Nsọ zite Jizọs na mbara ebe a ga-anwa? Na ìhè nke Mọ nkwupụta na Jizọs bụ Chineke uto na Ọkpara Chineke, na Luke's osuso-ọmumu nke na-egosi Jesus na-nwa nke Adam dị ka nke ọma, ọnwụnwa a na-esetịpụrụ idaha maka Jesus iji gosi na Ọ bụ onye Ọ nọ nnọọ na-ekwusa na-. Nke a esemokwu na wilderness enye Jesus ogbo gosi na ya bụ Chineke-nwoke.
It's fọrọ nke nta ka otú ọtụtụ zara ndị Miami Okpomọkụ nke a oge. Lebron James bụ MVP nke otu, ma otu ya can't merie egwuregwu. Ọ doo Cleveland Cavaliers, na ìgwè elu abụọ ọzọ oké egwuregwu. Ma mgbe ha na otu elu ha na-atụbakwa nnukwu ememe, etu ọnụ na, n'ihi na nke niile talent ha nwere, ha ga-emeri 5, 6, 7 - ma eleghị anya ọbụna karịa - n'asọmpi dị ka a otu. Ya mere onye ọ bụla ntị ịnya isi ha, they've nụrụ niile mama banyere nke a super otu. Ugbu a mgbe oge na-amalite ha nwere na-egosi elu na igosi na ha. Ị a ịtụnanya nrọ otu na you've kwusara onwe gị ịbụ? Na media na-ele na nyochara ha ọ bụla ịga na-ahụ ma ọ bụrụ na ha bụ ndị mere ihe akụkọ otu onye ọ bụla na-ele anya.
Ọfọn yiri ejiji, ogbo e setịpụrụ maka Jesus gosi na ya bụ Ọkpara Chineke. O ga-amasị Chineke?
Anyị nwere ike na-eche banyere Adam n'ogige. E mere ka ọ na ihe oyiyi nke Chineke, iji na-egosipụta Mọ ebube a pụrụ iche n'ụzọ. Ma mgbe ahụ, onye ọnwụnwa, agwọ na-abịa Eve na-eduhie ha ma. Ha nupụrụ Chineke, ikwere ụgha nke agwọ n'elu eziokwu nke Chineke. Adam adịghị abụ onye Chineke mere ya na-. Anyị na-ahụ Israel ke wilderness gwụsịrị irubere Chineke. Anyị na-ahụ nke a n'elu na n'elu ofụri Scriptures. Chineke na-eme ka nwoke ito Ya, ma nwoke ada ada na-enupụrụ Chineke.
Ya mere ga-nke abụọ Adam-enwe ike ime ihe ndị mbụ na-apụghị ime? Ga-Jesus-enwe ike ime ihe Israel apụghị ime? Ekwensu adịghị abịa ma nwaa Jizọs ruo ụbọchị iri anọ. Na Jizọs anaghị abụ onye Ọ a na-akpọsa na-. Jesus na-egosi Na ya bụ Ọkpara Chineke Onye bịara ịzọpụta anyị ná mmehie anyị na onye anyị na-enweghị mmehie nnukwu onye nchụàjà. Na Mmụọ Nsọ zigara Ya e ime nnọọ na.
ugbu a, M don't chọrọ m mgbe na-ghọtahiere ahụ pụtara na Chineke onwe-ya nwara Jizọs ime ihe ọjọ. Nke ahụ bụ ụgha. Ma, ọ bụ nnọọ ihe doro anya na Bible na anyị na-nwaa ime ihe ọjọ ọ ghara ịda na mpụga nke Mọ ọbụbụeze. It's abụghị ihe na echefuwo n'okpuru Rada. E nweghị onye na ihe ọ bụla na niile nke kere eke nke na-abụghị nke ya ikike. Chineke bụ kpam kpam Ọkaakaa. Ọ dịghị ihe dị n'ụwa na-eme eme na enweghị ikike nke anyị Ọkaakaa Chineke. Nke a ọnwụnwa na-eme site na ikike nke Chineke. Chineke kwere ya na iji ya n'ihi ebube-Ya site na Jizọs.
Ụmụnna, James na-eme ka dị nnọọ anya na mgbe anyị na-na-na-nwaa anyị na-adịghị na-anwa Chineke. Ma ịmara na Chineke na-ekwe na ọnwụnwa na Ọ na-ezube-eji ya maka ebube Ya. Chineke na-enwe mwute site eziokwu na e nwere ndị ọjọọ agha na ụwa na-agbalị ka ịlụso ike ya na derail gị si ụzọ nke ezi omume. Ma maara na ndị tempters zaa Nna gị n'Eluigwe. Na Ọ ga-eji ọbụna ha n'ihi ebube-Ya.
Ugbu a, m maara na e nwere ọtụtụ ndị anyị na-mgbe ụfọdụ nwere warara echiche banyere otú anyị nye Chineke otuto na ụwa. Anyị na-eche na Chineke na-na otuto n'ihu ọha nrubeisi dị otú ahụ dị ka na-ekere òkè ndị Gospel na ndị agbata obi anyị, ma ọ bụ udia-enweghị ebe obibi, ma ọ bụ ikwusa ozi ọma. M chọrọ ka unu mara nke a abụghị naanị ụdị nrubeisi na mkpa. Ma ọha na onwe nrubeisi okwu nke ukwuu. E-adịghị ga-abụ onye na-ege ntị ka unu na-eto Chineke nke Eluigwe na Ala.
Mgbe anyị na-na nzuzo, na anyị na-na-na-nwaa mehie, Chineke dị ebube site na nrube isi anyi. Chineke otuto mgbe anyị na-eguzogide-adọrọ adọrọ ụgha nke ndị iro, na-eso iwu nke ọma anyị na Chineke. Ọ na-eto Ya ịdị mma, na ya pụrụ ịtụkwasị obi, na ike Ya ịzọpụta ndị mmehie. Ya mere ụmụnna, oge ọ bụla Chineke-enye gị ohere a nwaa, ogbo a na-emekwa ka ị na-enye Chineke otuto site n'ikwere Ya ụgha nke ndị iro.
Chineke na-eme nwere nzube ekwe ka a nwaa anyị. Na nke a Chineke na-egosi Jizọs ka ọ bụrụ na-enweghị mmehie Ọkpara Chineke, onye nwere ike imeri ọnwụnwa nke ekwensu.
II.Weakness Abụghị ihe ngọpụ n'ọnwụnwa
Ọ rie ihe ọ bụla n'oge ndị ahụ, na na na njedebe nke ha ọ bụ agụụ na-agụ.
Dị ka Onyenwe anyị Jizọs na-nwaa, Ọ bụ na a na-adịghị ike na-adịghị ike ikwu. The ederede doro anya na Jizọs anọwo na-ebu ọnụ n'ihi na 40 ụbọchị. Ná ngwụsị nke ndị 40 ụbọchị Jizọs bụ agụụ na-agụ - nke yiri ụdị doro anya; na-eche banyere ịgọnahụ onwe gị nri 40 dum ụbọchị.
Anyị na-amasị na-eche Jizọs dị ka Superman, ma Ọ bụghị Superman. Ọ bụ Chineke-nwoke. E nwere ọdịiche. Jizọs bụ nwoke n'ezie. Ya mere, o-enwekwa ike ọgwụgwụ, ma ọ bụ adịghị ike, ma ọ bụ agụụ. N'okwu a, Setan na-anwa Jizọs a ngwangwa oge dị ka Ọ bụ agụụ na-agụ. Na ọ na-awakpo Jesus kpọmkwem ebe na-egwu ya ugbu a adịghị ike anụ ahụ.
Ọ na-anwa Jizọs na a ọzọ ozugbo eze, nri, na ihe nke na ọ pụrụ, n'ụzọ ziri ezi enweta. Ọ na-anwa Jizọs na ihe na pụrụ ịbụ ihe kwesịrị ekwesị na Ya, ma Jesus ọdọhọde Onwe. Jesus na-egosi onwe-ya ebe a, na-nwa nke mmadụ nke na bịara bụghị na-eje ozi, ma na-eje ozi.
Ụmụnna, anyị ekwesịghị nzuzu iji na-eche na Setan ga-awakpo anyị na oge anyị na-adịghị ike. M na-agụ a see okwu n'izu a na kwuru, "Ohere naanị-abịa na-akụ aka ozugbo, ma ọnwụnwa atọ na mgbịrịgba ọnụ ụzọ. "Ọnwụnwa adịghị ahapụ mfe. Ọnwụnwa ga-anọgide na-eyi gị. Dị ka villains na egwu movies onye ịchụ ahụ tara ruo mgbe ha mesịrị ịkwada ma ọ bụ na-ike gwụrụ na-agba ọsọ ọ bụla ọzọ. Na Setan na-agaghị na-ọ dị mfe na ị na ụfọdụ na-adịghị ike. Setan bụ onye iro anyị!
Nke a ga-adị ka ndị agha na-edebe ihe adịghị ike na ndị iro ha, na ị na-ekpebi ka chụọ nke ha. Ọfọn, ọ dịghị, that's bụghị otú ọ na-arụ ọrụ. Mgbe agha ahụ a adịghị ike, na bụ zuru okè oge ha ọgụ n'ihi na o na-aga nke ọma dị elu. Ọfọn a yiri ụzọ, ụwa, anụ, na ekwensu agaghị chụọ nke ụgha ha n'oge na-adịghị ike. n'ezie, ha ga na-awakpo gị ọzọ.
Ya mere, otú Jizọs si nwee ike imeri ọnwụnwa nke ekwensu na oge ya na-adịghị ike? It's ezi na ekwensu mgbe nwere ohere na-edu Jesus n'ime mmehie, ma olee otú Jizọs imeri Ya? Ọfọn, ma ọ bụrụ na anyị na-ele anya na Itie n'okpuru, anyị ga-ahụ na Jizọs mere ihe Adam na-emeghị. Jizọs kwere n'Okwu Chineke, n'elu Okwu nke Satan. Na Jesus osụk uche Ya ka uche Nna. N'oge ọnwụnwa, anyị shouldn't agbalị iguzogide site mere mkpebisi. N'ihi na eziokwu bụ onye ọ bụla n'ime anyị ike.
N'iguzogide ọnwụnwa n'oge na-adịghị ike na-amalite ụzọ n'ihu ọnwụnwa onwe ya. Izere ọnwụnwa ị ga na-enwe n'izu ọzọ amalite a izu. Gịnị ka ị na-ewere na? Gịnị ka ị na-ejuputa onwe gị na? Olee otú ị na udia okwukwe gị? Jizọs bụ na-adịghị ike. Ma ọ bụ ezie na Jizọs nwere ihe efu afo, O jupụtakwara nke Mmụọ. Anyị kwesịrị ịchọ, dị ka Ndị Efesọs na-agba ume, jupụta na - na nwere - Mọ nke Chineke. Anyị kwesịrị inwe anyị ihu na Okwu Ya, ebe Ọ na-enye ma na-elekọta anyị nwere okwukwe na nkwa ya. Na anyị kwesịrị ime nke a n'akụkụ ụmụnna anyị na okwukwe.
E nwere ụfọdụ ná ndụ anyị mgbe anyị na-eche na-adịghị ike dị iche iche ihe. Anyị nwere ike ịbụ na ike gwụrụ, ma ọ bụ mmetụta uche drained, ma ọ bụ na-arịa ọrịa, ma ọ bụ ma eleghị anya we're kwenyesiri nnọọ ike na ume anyị na we're na-adịghị ike na-enweghị ebe ọ maara na ya. Ma, n'agbanyeghị ihe bụ adịghị ike ahụ bụ, it's bụghị ihe ngọpụ iji nye na. N'oge ndị a na-adịghị ike oge na-enye nke ọnwunwa nwere ike iyi ihe mara mma, ma Okwu Chineke bụ ka ezi, na Setan seduction bụ ka a ụgha.
Mgbe you're nwaa mmekọahụ rụrụ arụ na-echetara onwe gị na Chineke sịrị, "Ị na-adịghị na gị onwe gị, ị zụtara a price. Ya mere nye Chineke otuto ahụ gị. "Ma mgbe you're nwaa na-nganga nke gụnyere na achọ naanị uru na-echetara onwe gị na Chineke sịrị, "Don't dị nnọọ anya anyị maka onwe gị ma maka ọdịmma nke ndị ọzọ." N'oge na-adịghị ike anyị kwesịrị, dị ka Jizọs, jidesienụ Okwu Chineke ma na-erubere Ya.
Agụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ a, anyị nwere ike ịdabere ná kwupụta bụ daa mbà, na-eche echiche, "Man, Jizọs bụ nsọ, m chọrọ ka m nwere ike ịbụ ka Ya,"ma ọ bụ, "Man, I'm ọzọ ka ndị mbụ Adam karịa nke abụọ. M ihe dị ka Jonah karịa Jesus. "Ụmụnna, nke ahụ bụ eziokwu nke Kraịst ọ bụla na-abụghị Christian. Anyị niile bụ ihe dị ka Jonah karịa Jesus.
Ma ihe banyere nrubeisi nke Jizọs na anyị na-agụ banyere ebe a bụ na Jizọs abụghị nnọọ nwoke ọzọ. Jisọs abụghị nanị onye ọzọ nke anyị na-nọ na-na-erube isi otu. No, Jizọs bụ ọhụrụ Adam bụ onye bịara na-anọchite anya anyị n'isi. The nrubeisi nke Jesus bụghị naanị Chineke mma na oge, ma Jesus erube maka anyị na anyị nwere ike na-amasị Chineke. Jesus otú ihe anyị na couldn't eme. Ọ na-aga ule ndị Adam nwere ike agaghị agabiga na na Israel nwere ike agaghị agabiga - na na ọ dịghị onye tupu ma ọ bụ mgbe Ya ike rue. Jesus erube ebe onye ọ bụla nke anyị nwere ike. Jesus merie ndị iro onye n'ime anyị ga-emeri. Na nke a karịsịa imeri, na desert, nọ na-ekwu ihe na-enwe mmeri e meriri Setan ga-eme na njedebe nke Luke's gospel.
Ọ bụ ezie na Jonah bụ kwa ilu ọbụna ikwusara ndị iro Ya, Onyenwe anyị Jizọs bịara n'ụwa, nwụọ maka ndị iro Ya. Na cross Jesus ugwo maka ọ bụla otu oge na anyị nyere ka ọnwụnwa merie. Ọ bụla otu oge. N'ihi na onye kwere ekwe, ọ dịghị onye mmehie nke anyị na Jizọs na-akwụ maka. Na Jesus si n'ili bilie, ndikan mmehie, ọnwụ, na ekwensu. Na ekwensu na meriri. Ma ọ bụrụ na anyị ga-ahapụ anyị mmehie anyị ma na-etinye okwukwe anyị na Kraịst anyị pụrụ inweta niile ụgwọ ọrụ na ọ akwụ. Ịhụ nrubeisi nke Jesus ekwesịghị ime ka anyị, ọ ga-agba anyị ume.
Nke a izu mgbe ị na-anwa ọnwụnwa mehie, cheta na onye iro gị esesịn emeriwo gị Onyenwe. Ị don't ga-enye na mmehie gị. Ọnwunwa esesịn efu. Your n'agbụ e tiwara. Ije na nnwere onwe zụrụ ị na cross. Don't mkpụrụ na-achọ n'aka nke a meriri onye iro. Jizọs nwụrụ ma bilie, na anyị ga-enwe ike iguzogide ọnwunwa, na-ele anya ka Ya. Anyị na-indwelled na otu Mmụọ Nsọ na anyị eji otu agha.
Mgbe a nwara anyị, let's cheta na Chineke na-ekwe na-eji ọnwụnwa, na adịghị ike abụghị ihe ngọpụ n'ọnwụnwa, na na ọnwunwa esesịn a meriri.
Onye dere Hibru ese ọnwụnwa a na okụt nnukwu agbamume e:
N'ihi na anyị enweghị a nnukwu onye nchụàjà bụ enweghị ike imetara anyị ebere n'adịghị ike, ma anyị nwere onye a nwaa n'ụzọ ọ bụla, dị ka anyị bụ -Ma enweghị mmehie. Ka anyị mgbe agakwuru oche-eze amara na obi ike, ka anyị wee na-enweta ebere na-ahụ amara inyere ayi aka n'oge nkpà. (Ndị Hibru 4:15-16)
The Onyenwe anyị Jizọs ike ịghọta na anyị. Ọ a nwaa dị ka anyị na-na-anwa ọnwụnwa, ma Ọ mgbe mgbe nyere na-eme Ya zuru okè nnukwu onye nchụàjà. Ya mere anyị pụrụ ịgakwuru ocheeze Ya na obi ike, -arịọ maka ebere na amara. Let's gaa Ya now.
Jem973 • October 29, 2013 na 2:26 pm • zaghachi
Ekele gị nke ukwuu maka ozizi ! Ọ bụ otú oké na-maara otú ihe anyị na Chineke maara ọ bụla ọnwụnwa bịaara anyị ka anyị ! Ọ bụ ya mere oké ịmara na Jizọs a nwaa enweghị nyere, na ịmata na ekwensu na-meriri !!
Ekele gị nke ukwuu maka agbamume ! Chineke na-agọzi gị ozi na ezinụlọ gị.
(Ndo maka m bekee, M french)